BPS/Degmada6aad - 8aad
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 9:30am-3:40pm
Lambarka Taleefanka 617-635-1650
Waxaan ardayda siina khibrad waxbarasho oo adag oo ku saabsan daryeesha deegaanka. Dhamaan ardayda ayaa barta casharada Banii'aadamnimada, Xisaabta iyo Sayniska. Barnaamijkeena ESL ee xoogan ayaa siiya ardayda iyo qoysaska taageerada ay ugu baahanyihiin kaguul gaarista Barashada Ingiriiska.
Casharo gaar ah, isboortiga badan, naadiyayaasha, iyo hawlo ay ku jiraan fanka, riwaayadaha, qalabka muusikada, sayniska, xisaabta, iyo warbaahinta. Kulanada casharada iyo nashaadaadka gaarka ee Sabtida ladhigo oo lacag la'aan ah.
Frederick Pilot Middle School wuxuu uga baahan yahay dhammaan ardayda in ay xirtaan yunifoom. Ardaydu waa in ay xirtaan boorso buluug ah oo leh astaanta dugsiga kaas oo laga iibsan karo qiimo hooseeya L&M Bargain.
Fasalada Casharada Sare Ayaa ladhigaa
Waxbarasho tayo leh oo la baraayo Dhammaan ardayda (EFA) fasallada 6
Naafada Dhanka Caqliga oo dhexdhexaad ah
Xaruunta lagu Barto Ingiriiska - Luuqadaha Badan ee Fasallada 6,7, 8
Xaruunta lagu Barto Ingiriiska - Isbaanisha Fasalada 6,7, 8
Ardayda leh Waxbarashada Xadidadan ama ay kakala Go'day waxbarashada Caadiga ah- Luuqado Badan
Ardayda leh Waxbarashada Xadidadan ama ay kakala Go'day waxbarashada Caadiga ah - Isbaanish